Indlela Yokumelana Nokuhlala Unexhala
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISidama ISilozi ISpanish Isi-Iban Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAcholi IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBatak (SaseToba) IsiBengali IsiBhulu IsiBulgarian IsiCambodia IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitonga (SaseMalawi) IsiChitumbuka IsiChiyao IsiChokwe IsiChol IsiCibemba IsiCinyanja IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGarifuna IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiGujarati IsiGun IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHmong (White) IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKannada IsiKaren (SaseS'gaw) IsiKazakh IsiKikamba IsiKikaonde IsiKikongo IsiKikuyu IsiKiluba IsiKimbundu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKiribati IsiKirundi IsiKisi IsiKisonge IsiKongo IsiKorea IsiKrio IsiLamba IsiLatvia IsiLhukonzo IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLunda IsiLuo IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMaltese IsiMam IsiMambwe-Lungu IsiMarathi IsiMaya IsiMazatec (sesiHuautla) IsiMongolia IsiMoore IsiMyanmar IsiNahuatl (saseHuasteca) IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNgabere IsiNgesi IsiNorway IsiNyaneka IsiNzema IsiOromo IsiOssetia IsiOtetela IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseBolivia) IsiQuichua (SaseImbabura) IsiRarotonga IsiRashiya IsiRomania IsiRunyankore IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwedish IsiTagalog IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTigrinya IsiTlapanec IsiTojolabal IsiTok Pisin IsiTotonac IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTuvaluan IsiTwi IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUmbundu IsiUrdu IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiWayuunaiki IsiXhosa IsiYoruba IsiZande IsiZulu isi-Igbo isiZapotec (saseIsthmus)
“Ndaya evenkileni ndisithi ndiyothenga ukutya, ndafika kukho nje amaqebengwana, abe ebiza intloko yetreyini! Kusuku olulandelayo, kwakuphele tu ukutya ezivenkileni.”—UPaul, waseZimbabwe.
“Umyeni wam wandihlalisa phantsi, wathi uyasishiya. Ndandiza kukunyamezela njani oku kungcatshwa? Ndandiza kubathini abantwana bam?”—UJanet, waseMerika.
“Xa kukhala ialamu, ndiye ndilale phantsi kwindawo ekhuselekileyo njengoko imijukujelwa iqhushumba. Kuye kudlule iiyure izandla zam zisangcangcazela.”—UAlona, waseIsrael.
Siphila ‘kumaxesha amanqam ekunzima ukujamelana nawo’ nabangela ixhala. (2 Timoti 3:1) Abantu abaninzi baxhalatyiswa ziingxaki zemali, ukuqhekeka kweentsapho, iimfazwe, izifo ezibulalayo neentlekele zemvelo okanye ezenziwe ngabantu. Kuthi kunjalo kube kukho nezinto ezixhalabisa mntu ngamnye: ‘Ngaba eli qhuma lisemzimbeni wam liza kuba ngumhlaza?’ ‘Liya kube linjani ihlabathi xa kuphila abazukulwana bam?’
Ngamanye amaxesha akukho nto imbi ekubeni nexhala. Ngokomzekelo, siye sibe novalo xa siza kubhala iimviwo, siza kuma phambi kwabantu okanye sisiya kufuna umsebenzi wempangelo. Ukanti kuhle ukoyika ingozi, kuba kunokusisindisa. Kodwa ke, kuyingozi ukuxhalaba ngokugqithiseleyo. Uhlolisiso oluye lwenziwa kubantu abadala abangaphezu kwe-68 000, lubonise ukuba kwanexhala nje elingenamsebenzi linokubangela ubani afe ngaphambi kwexesha. Ngenxa yeso sizathu uYesu wabuza wathi: “Ngubani na kuni onokuthi ngokuba nexhala ongeze ikubhite enye kubude bobomi bakhe?” Kaloku ixhala alongezi nomzuzwana lo kubomi bomntu. Yiloo nto uYesu wacebisa wathi: ‘Musani ukuxhalaba.’ (Mateyu 6:25, 27) Kodwa ingenzeka njani loo nto?
Ukuze sikwazi ukwenza oko, kufuneka sisebenzise amacebiso obulumko, sibe nokholo kuThixo, size sisebenzele ukuba nekamva elihle. Enoba asikho kwiimeko ezimaxongo ngoku, zisenokusifikela kwixesha elizayo. Ngoku makhe sibone ukuba oku kuye kwamnceda njani uPaul, uJanet, noAlona ukuba bayeke ukuxhalaba.
Text Iimpapasho onokuzikhuphela IMBONISELO Julayi 2015 | Indlela Yokumelana Namaxhala